कोरोना भाइरसः अफवाह र त्रासको भुलभुलैया « Salleri Khabar
कोरोना भाइरसः अफवाह र त्रासको भुलभुलैया
डा. हरि न्यौपाने
संसार भरी फैलिदै गएको कोभिड–१९ ले नेपालमा पनि भयावह स्थिति सृजना नगरोस भनेर भर्खरै नेपाल सरकारले अत्याव श्य बाहेकका अन्य कुरा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, सिनेमा हल लगायतका कुरालाई बन्द गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणको गतिलाई कम गर्न सरकारले चालेको कदम प्रशंसनीय नै छ । तर, यसै बिच सामाजिक संजालमा फैलिएका अफवाहले नेपाली समाजमा त्रासको स्थिति सृृजना गरिदिएको छ । र, त्यो त्रासको एउटा मात्र कारण भनेको हामीलाई कोरोना भाइरसको बारेमा प्रयाप्त ज्ञान नहुनु नै हो । त्यसैले जसले जे सुकै भने पनि हामी पत्याइदिन तयार छौँ । हाम्रो यहीं कारणले अफवाह फैलिनलाई झन् मलजल पुर्याएको छ ।
१) हाम्रा भ्रम
नेपाली समाज अहिले अनेकन भ्रमका बिच संघर्षरत छ । केही हप्ता अगाडि ‘कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने’ एउटा वडा स्तरीय भेलामा एकजना बुद्धिजीवीले आफू सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको नजिकै बस्ने र त्यहाँ अत्यन्त प्रदुषण हुने भएकाले कोरोना आउन नसक्ने ठोकुवा गर्नु भएको थियो । यस्तै ठोकुवा प्रदुषणपुरी कान्तिपुरी नगरीका अधिकांश स्थायी तथा अस्थायी बासिन्दाहरुले गर्नु भएको समाजिक संजालमा देख्न र छिमेकमा सुन्न पाइन्छ । उहाँहरुलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि भाइरसको कुनै नाक, मुख, फोक्सो हँुदैन । यो बस व मोटरसाइकलमा बसेर हावा खाँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने पनि होइन । त्यसैले यसलाई काठमाडाैँ वा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको वरिपरिको प्रदुषणले कुनै असर गर्दैन । यो तपाईंको शरीरको मुख्य गरी श्वासप्रश्वास प्रणालीका अंगहरुको कोषभित्र बस्दछ । त्यसैले रक्सी पिउँदैमा भाइरस मर्ने र पानी पिउँदैमा पखालिएर पेटमा पुग्ने हुँदैन ।
अर्को भनेको कोरोना लागे मरिहालिन्छ भन्ने भ्रम हो । केही वयस्क व्यक्तिहरुमा देखिए पनि यो भ्रम प्रायः गरेर विद्यालय जाने केटाकेटीमा बढी देखिन्छ । जसले उनीहरुमा मानसिक तनावको स्थिति सृजना गरेको छ । रोगका बारेमा साना नानीहरुमा सजिलै अफवाह फैलिनु, उनीहरुको भ्रमको निवारण गर्न अभिभावकले कदम नचाल्नु र विद्यालय बन्द हुँदा पनि रोग लाग्ने डरले घरमै बस्नुपर्ने स्थितिले साना नानीहरुमा त्रास झन बढ्ने देखिन्छ । यस्तो बेला उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यलाई थप बिग्रन नदिन अभिभावकहरुले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर आफ्ना नानीबाबुहरुमा भएको भ्रम हटाएर सही ज्ञान तथा सूचना दिन सक्नुपर्दछ ।
तेस्रो हल्ला गर्नेहरु कोरोना लागेको शंकाले कुनै अस्पतालले भर्ना गर्न मानेन भन्नेहरु हुन् । मुख्य कुरा त यो भाइरस अत्यन्त चाँडैं फैलिने हुनाले सरकारले तोकेका बाहेक अस्पतालमा लैजादा झन फैलिने डर हुन्छ । त्यस्ता अस्पतालमा अन्य रोगसँग लडिराखेका बिरामीहरु पनि हुन्छन । त्यस्ता बिरामीहरुमा कोरोनाको थप संक्रमणसँग लड्ने क्षमता नहुन पनि सक्छ र कोरोनाकै संक्रमणले ज्यान गुमाउन सक्छन । के हामीमा आफ्नालाई बचाउने हतारमा अर्काको जिन्दगी धरापमा पारिदिने अधिकार छ ? यसरी कोरोना लागेका बिरामीलाई मन लागेको अस्पतालमा डुलाउँदै हिँड्दा संक्रमण हाम्रो काबुबाट बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले कोरोनाको शंका भएमा सरकारले तोकेकौ अस्पतालमा लैजानु पर्छ ।
अर्को भ्रम कोरोना भाइरस लागेर धेरै नै मानिस मरिराखेका छन तर नेपाल सरकारले घटना लुकाई राखेको छ भन्ने । यहीं भ्रमले गर्दा पशुपतिको आर्यघाटमा जल्दै गरेको शवलाई पनि कोरोना लागेर मरेको ठोकुवा गर्नेहरु हाम्रै वरपर छन । हरेक दिन जलाइने लाश गनेर भित्तामा धर्का कोरेर बसे झंै गर्नेहरु पशुपतिमा जल्ने लाशको संख्या ह्वात्तै बढेको ठोकुवा गर्दै अफवाहलाई मलजल गर्न व्यस्त छन । कोरोनाको संक्रमण कसैले लुकाएर लुक्ने कुरा होइन र यो कुरा लुकाएर सरकारलाई के फाइदा ? लुकाएर फाइदा हुने भए चीनले लुकाउँदैन थियो होला ?
टाउको दुख्नु, ज्वरो आउनु, नाकबाट पानी बग्नु कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षण हुन् । तर, यी लक्षण कोरोनाका मात्र होइनन् । मौसमी रुघाखोकीमा पनि यिनै लक्षणहरु देखिन्छन । कोरोना लाग्दैमा सबै जना सिकिस्त हुन्छन् भन्ने हँुदैन । अधिकांशलाई केही दिन ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र सुख्खा खोकी लागी आफै निको भएर जान्छ । त्यसैले कोरोना लाग्दैमा आत्तिएर अस्पताल दौडिहाल्नु पर्दैन । घरमै छुट्टै बसी आराम गर्दा पनि अधिकांश मानिसलाई निको हुन्छ । अर्को कुरा कोरोनाको संक्रमण एकै पटकमा धेरै जनालाई हुने हुँदा सामान्य लक्षण भएका व्यक्तिहरु पनि अस्पतालमा भर्ना हुन मरिहत्ते गर्दा साँच्चिकै उपचार चाहिनेहरुले उपचार नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
२) देशको संकटमा हाम्रो औकात
देशमा कोरोनाको संक्रमण देखा नपर्दै यसलाई फैलिनबाट रोक्न सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका कुरा बन्द गर्दै गर्दा काठमाडाैँ छाडेर बाहिर जानेको घुइँचो बढेको छ । यसले काठमाडौको जनघनत्व घटाउनुको साथै रोग फैलनबाट रोक्न पनि सहयोग पुर्याउँछ । केही गरी रोग फैलिएमा पनि जनसंख्या घटेकाले बाँकी रहेका मानिसलाई स्वास्थ्य सेवा लगायतका अन्य आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारलाई तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ ।
संकट कहिले आउला र उपभोक्ताको ढाड सेकाउँला भनेर र्याल काढेर बसेकाहरुको कुरुप आकृति अहिले देख्न पाइन्छ । देशको संकटलाई पनि आम्दानीको मौकाका रुपमा लिनाले अहिले नेपाली जनता कोरोना भन्दा पनि कालोबजारीको मारले आक्रान्त छन । दैनिक उपभोग्य वस्तुले आकाश छोएको छ र कालोबजारीलाई जसरी भए पनि रोक्ने हौवा पिटिराखेको सरकार यस कार्यलाई पूर्ण रुपमा सफल पारेको छैन । यदि भोलिका दिनहरुमा सहर पुरै क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने दिनगन्ती ज्यालादारीले मुखमा माड लाउनेहरु बढी प्रभावित हुने देखिन्छन । उनीहरु कोरोनालाई फैलिनबाट रोक्न क्वारेन्टाइनमा मात्र होइन भोकै पनि बस्नपर्ने हुनसक्छ ।
संकटको घडीमा सरकारको आदेश पालना गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो तर अर्को सूचना लागू नहौन्जेल सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने र नयाँ भर्ना पनि नलिने सरकारको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै काठमाडांैका केही नाम चलेका विद्यालयले धमाधम भर्ना खोलेको समाचार आइराखेका छन । विपतमा कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान नभएकाहरुले विद्यार्थीलाई के सिकाउलान ? यो प्रश्न अब सबै अभिभावकले आफैलाई सोध्नुपर्छ । सुँगा रटाई र अंग्रेजी लवज मात्र ज्ञान होइन । र ती अटेरी विद्यालयले अप्रत्यक्ष रुपमा तपाईंका छोराछोरीलाई संकटको घडीमा सरकारको आग्रहलाई कसरी उपहास गर्न सकिन्छ भनेर सिकाइ राखेका छन । के तपार्इंले खर्च गरेको पैसा यहीं अनुशासन बिहीन व्यवहार किन्नका लागि हो ? ज्ञान भन्दा अनुशासन र व्यवहार धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालका अर्का अजीव वर्ग भनेका राजनैतिक दल हुन जुन जहिले पनि सरकारका आदेश र सामान्य अनुशासन भन्दा माथि नै हुन्छन । सरकारले २५ जना भन्दा बढी भेला नहुन आदेश दिंदै गर्दा कतिपय राजनैतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने, भेटघाट गर्ने, नयाँ कार्यकर्ता थप्ने कामलाई जारी राखेका छन् ।
अर्को कुरो धेरै भीडभाड गर्दा झन चाँडै फैलने रोगको जनचेतना जगाउन दोहोरीको आयोजना गरेको, जुलुस निकालेको र महायज्ञ लगाएको सुन्दा यो स्तम्भकार सोंचमग्न हुन्छ कि आफूले आफै माथि गर्ने यो भन्दा भयंकर मजाक अरु के हुन सक्छ ?
संकटग्रस्त समय अफवाह फैलिनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । यस्तै अफवाह केही बर्षअघि भूकम्प जाँदा नि फैलिएका थिए । यस्ता अफवाहबाट बच्न सरकारी संस्थाले तथा विश्वसनीय संस्थाले उपलब्ध गराएको सूचना मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । अफवाह पनि एक प्रकारको भाइरस भएकाले यसलाई फैलिनबाट सकेसम्म रोक्नु पर्दछ । अहिलेसम्म कोरोनाको उपचारमा केही औषधिहरु परीक्षण गरिएका छन र तिनका प्रारम्भिक नतिजा आशलाग्दा छन । केही देशका औषधि कम्पनीहरु यसको भ्याक्सिन बनाउन पनि जुटेका छन । तर हाललाई कोरोनासँग लड्न तपाईंसँंग भएको चिज भनेको तपार्इंको रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता हो । सकेसम्म रोग लाग्न र फैलिन नदिनुस् । कोरोना लागि हालेर घरमै छुट्टै बसेर आराम गर्नुस । रोगले बढी च्यापेमा सरकारले तोकेको ठाउँमा मात्र उपचार गर्न जानुस् ।
हामी वीर हौँ
हामी बहादुर पनि हौँ
अब अनुशासित बन्ने पालो ।